Amathuba Wokuzithandela - IGalveston County Food Bank
Ngabe ubheke ukubuyisela emphakathini?
Zinikele namuhla ukwenza umehluko ezimpilweni zomakhelwane bakho!
Izinyathelo zokubhalisela ithuba lokuzithandela online.
1. Chofoza isixhumanisi sekhasi lethu le-SignUp.com ngezansi.
2. Khetha usuku onentshisekelo kulo.
3. Khetha ithuba lokuzithandela ofisa ukubamba iqhaza kulo.
4. Chofoza inkinobho eluhlaza Bhalisa ukuze ubhalise. (Uma inkinobho impunga lapho leyo ndawo yokuzithandela isivele igcwele).
5. Landela izinyathelo ezilandelayo ukuqedela inqubo yokubhalisa.
Chofoza lapha ukufinyelela ikhasi lethu le-SignUp.com
Landa ifomu Lokukhishwa Kwezikweletu Zokuzithandela
Udinga usizo? Shayela Umxhumanisi Wamavolontiya ukuthola eminye imininingwane ku (409) 945-4232 noma nge-imeyili ku Vol.
Inkantolo Yala Umsebenzi Womphakathi
Yimaphi amacala angamukelwa?
I-GCFB ayemukeli i-Drug Related, Theft, noma i-Violent Crimes.
Ingabe kukhona umkhawulo weminyaka?
Umkhawulo weminyaka ukhonjiswe Izidingo Zokuzithandela ze-GCFB (11+)
Yimaphi amaphepha adingekayo?
Amaphepha okuqala avela eNkantolo kanye / noma kwi-Probation Officer kufanele anikezwe kuMxhumanisi Wamavolontiya ukuze aqinisekise amacala futhi enze ikhophi azoyifaka kufayela labasebenzi.
Sicela ugcwalise ifomu elingezansi.
Isivumelwano Senkantolo Sokuqokwa Komsebenzi Womphakathi 2020
Ungaxhumana nobani maqondana nomsebenzi womphakathi?
Xhumana noMxhumanisi Wamavolontiya nge-imeyili, Volunteer@galvestoncountyfoodbank.org noma ucingo 409-945-4232.
Ingabe kukhona olunye ulwazi oludingekayo?
Onke Amavolontiya aqokiwe eNkantolo ayadingeka ukuthi eze mathupha ehhovisi ukuze kutholakale isikhashana. Umumo uqukethe ukugcwalisa Ifomu Lomsebenzi Womphakathi, ukusayina i-GCFB Waiver, ukudala i-Sign-In Sheet, nokuqeqeshwa kokuthi ungabhalisela kanjani amashifu.
Ingabe zikhona izidingo zokugqoka?
Azikho izingubo ezixekethile noma ezigqokile
Abukho ubucwebe obulengayo (amasongo entelezi, imigexo emide noma amacici)
Akunama-flip-flops, izimbadada noma izicathulo zokushelela
Azikho izicathulo ezingenamhlane (isb. Iminyuzi)
Izicathulo zezinzwane ezivaliwe kuphela
Akunampahla ebonakalayo noma eveza obala
Ihembe elinemikhono kuphela
Azikho iziqongo zamathangi, i-spaghetti strap top, noma iziqongo ezingenantambo.
Yini edingekayo ukuhlela ithuba lokuzithandela leqembu?
Gcwalisa ifomu lokubamba iqhaza lokuzithandela bese ulithumela kuMxhumanisi Wamavolontiya ukuze avunyelwe.
Ifomu Lokuzibandakanya Kwamavolontiya Eqembu
Ngabe kukhona amanye amafomu adingekayo?
Umuntu ngamunye oneqembu kudingeka agcwalise ifomu lokuyekethisa lamavolontiya.
Ifomu Lokukhipha Umthwalo Wokuzithandela
Bangaki abantu abathathwa njengeqembu?
Abantu aba-5 noma ngaphezulu bebhekwa njengeqembu.
Yini ubukhulu obukhulu bamaqembu obuvunyelwe?
Ngalesi sikhathi, abukho ubukhulu obukhulu bamaqembu kepha buzohluka ngokutholakala okuvulekile. Uma kuneqembu elikhulu ngokwanele, sizohlukanisa iqembu libe ngamaqembu amancane ukusiza ezindaweni ezinesidingo (okungukuthi, indawo yokudla, ukuhlunga, i-Kid Pacz, njll.)
Amavolontiya kumele okungenani abe neminyaka engu-11 noma ngaphezulu.
Sidinga okungenani umuntu omdala oyedwa / umpheki ngabantwana abayi-1. Abantu abadala / abaphathi babo kudingeka ukuthi bagade izingane ngaso sonke isikhathi.
Kuthiwani uma iqembu lami lingakwazi ukuya osukwini lwethu lokuzithandela?
Sicela uthumele i-imeyili kumxhumanisi wamavolontiya ngokushesha okukhulu ukukhulula lawo mabala, ukuze abanye bazinikele nathi.
Ingabe ama-walk-ins amukelekile?
Yebo, amavolontiya angena ngaphakathi amukelekile ngoLwesibili - ngoLwesine ngo-9 ekuseni kuya ku-3 ntambama nangoLwesihlanu ngo-9 ekuseni kuya ku-12 ebusuku.
Sicela wazi ukuthi izindawo zethu zokuvolontiya zigcwaliswa ngokushesha futhi kungcono ukuhlela online.
Chofoza lapha ukuze ubhalise
Amavolontiya kumele okungenani abe neminyaka engu-11 noma ngaphezulu. Izingane ezineminyaka engu-11 kuya ku-14 kumele zibe nomuntu omdala ngenkathi zisebenza ngokuzithandela. Izingane ezineminyaka engu-15-17 kumele zithole imvume yabazali / yomnakekeli kwifomu lokuyekethisa lamavolontiya.
Ifomu Lokukhipha Imali Lamavolontiya
Samukela izinsuku zokuzithandela zeqembu! Singakwazi ukuhlela abasebenzi bakho, iqembu lesonto, iklabhu noma inhlangano ngokucela kwakho. Bheka izinsuku ezivulekile ekhasini lethu le-SignUp.com futhi uma zingalingani nesheduli yakho sithumele i-imeyili ukuze ubone ukuthi yini engasethelwa iqembu lakho.
Chofoza Lapha Ukulanda Ifomu Lokuzibandakanya Lamavolontiya Eqembu
Sabelana ngokudla ezindaweni zethu eziseTexas City njalo ngoLwesibili, ngoLwesithathu, ngoLwesine kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-3 ntambama nangoLwesihlanu kusuka ngo-9 ekuseni kuya ku-12 ebusuku. Imvamisa sidinga okungenani amavolontiya ayi-10 okusiza epanini. Ivolontiya lethu lidinga ukuguquka kaningi, ngakho-ke sicela ubheke ikhasi lethu leSignUp.com kaningi.
Kunezindawo zokuvolontiya zangoMgqibelo ezivulwa kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-12 ebusuku. Sicela ubhalise kusengaphambili. Sithanda ukuba okungenani namavolontiya angama-20 ngempelasonto. I-2nd NgoMgqibelo wanyanga zonke kulungiswa amabhokisi aboshwe ekhaya, aphuma aye kubantu abadala nabakhubazekile abangakwazi ukuza kithi ukuthola izinsizakalo zethu.
Sinesidingo sanyanga zonke sanoma ngubani ongathanda ukuthola ithuba lokuzithandela elingaguquguquki lokuthatha amabhokisi asekhaya asebekhulile nabakhubazekile kuyo yonke iGalveston County. Leli yithuba lokuzithandela kanye ngenyanga futhi amavolontiya kufanele agcwalise isheke sangemuva. Xhumana noKelly Boyer ku- Kelly@galvestoncountyfoodbank.org ukuze uthole olunye ulwazi.
Sinikela ngokuvolontiya kwesiQhingi ngeGalveston College - Food for Thought Program. Lezi zisebenzi zokuzithandela kufanele zigcwalise isheke sangemuva ngaphandle kwezindleko. Lokhu kudinga ukuqedwa ezinsukwini ezi-3 ngaphambi kosuku lokuvolontiya. Sicela uxhumane noMxhumanisi Wokuzithandela ngefomu lokuhlola ngemuva, Vol
Sicela ubheke ikhasi lethu leSignUp.com ngo-Ephreli kuya kuJuni ukusiza ngohlelo lwethu lokudla kwezingane zasehlobo iKidz Pacz.
Uma unesibindi sokuthusa, sinamathuba wokuzithandela e-Haunted Warehouse phakathi nenyanga ka-Okthoba. Xhumana noJulie Morreale ku Julie@Galvestoncountyfoodbank.org
Joyina nathi ekuholeni impi yokuqeda indlala eGalveston County.